Wild Rift Patch 2.2 – Champions အသစ်များ ၊ Wild Pass ၊ ARAM mode နှင့် အခြားအရာများ | Codashop Blog MM
Wild Rift Patch 2.2 – Champions အသစ်များ ၊ Wild Pass ၊ ARAM mode နှင့် အခြားအရာများ
League of Legends : Wild Rift Patch 2.2 မှာ ကစားသမားတွေအားလုံး စောင့်ဆိုင်းသင့်တဲ့ အရာတွေအများကြီပါဘဲ။ ဒီ Patch အသစ်မှာတော့ Champion အသစ်တွေ အားလုံမျှော်နေတဲ့ ARAM (All Random All Mid) ရယ်၊ Wild Pass ရယ် ၊ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ Position ရွေးချယ်မှု နှင့် အခြားအရာမြောက်များစွာပါ၀င်ပါတယ်။
အရင်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ Champion အသစ်တွေ Rift ဆီကို လာတော့မယ်ဆိုတာပါဘဲ။ The Colossus. The Great City of Demacia က ဒီ Tank ကြီးကတော့ ဧပြီရယ် ၁ ရက်နေ့မှာ ရောက်ရှိလာမှာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ သင် သူ့ကို ရန်သူတွေကို ချုပ်ထားနိုင်တဲ့ Main Warden အဖြစ် အသုံပြုဖို့ စိတ်လှုပ်ရှားနေပြီလား? နောက်မကြာခင်ထွက်ရှိတော့မယ့်သူတွေကတော့ Kha’Zix (Assassin from The Void) ၊ Renekton (Fighter from Shurima) ၊ Rammus (Tank from Shurima) နဲ့ Rengar of Ixtal တို့ဘဲဖြစ်ပါတယ်။
Tank တွေကို အမြဲကိုင်သူတွေ အတွက် ဒါတွေက အ‌ရေးကြီးပါတယ်။ Item အသစ်တွေက Battlefield မှာ Garen တို့ ၊ Malphite တို့ နဲ့ အခြားအရာတွေဖြစ်တဲ့ Itemization ကောင်းပြီး အမျိုးမျိုးသုံးနိုင်အောင် ကူပေးမှာပါ။ Item အသစ်တွေက League PC Version လိုမျိုးတူမှာပါ။
ARAM အတွက် အသင့်ပြင်ထားပါ (စမ်းသပ်စဲကာလာ)
League PC Version က ကစားသမားတိုင်းကြိုက်ကြတဲ့ ဒီအတွေ့အကြုံကို Wild Rift ကစားသမားတွေ ရရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်! ဒီ All Random All Mid (ARAM) game mode (စမ်းသပ်စဲ) က ဒီအချိန်အတောအတွင်းမှာ စမ်းသုံးကြည့်နိုင်ပြီး Howling Abyss မှာ ရရှိနိုင်မှာပါ။
ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ Position ရွေးချယ်မှု (စမ်းသပ်စဲကာလာ)
Patch 2.2 ရဲ့ နောက်ထပ် ထူးခြားတဲ့ Feature ကတော့ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ Position ရွေးချယ်မှုဘဲဖြစ်ပါတယ်။ PC Version က Position ရွေးချယ်မှုလိုဘဲ Wild Rift ကစားသမားတွေက ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ Solo Lane ၊ Jungle ၊ Mid Lane ၊ Duo Lane နှင့် Support ဆိုပြီး Position တွေကို ရွေးချယ်နိုင်မှာပါ။ ဒါကတော့ ဂိမ်းထဲမှာ မကြာခင်မှာရရှိတော့မှာဖြစ်ပြီး League အသိုင်းအဝိုင်းမှာ အမေးများတဲ့ Feature ဖြစ်လို့ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ Position ကို ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းပေးမှာပါ။
Position Preference အကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန် အပြည့်အစုံကို အောက်ပါ Link တွင် ကြည့်ပါ။
ကစားသမားတွေအတွက် ပိုကောင်းတဲ့ အရာတွေ ကစားရင်းရနိုင်ဖို့ကိုလဲ ဂိမ်းက Wild Pass ဆိုတာနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကစားသမားတွေက Wild Pass ကို Upgrade လေလေ ပိုကောင်းတဲ့ Reward တွေတို့ Exclusive Skin ဖြစ်တဲ့ Level 50 မှာ ရနိုင်တဲ့ Hexplorer Jax ကိုရနိုင်ပါတယ်။
Wild Pass က ဧပြီလ ၂ ရက်နေ့မှာ ဖြစ်မဲ့ Ranked Season2မှာစတင်ရရှိမှာဖြစ်ပြီး Wild Cores ၅၉၀ နဲ့ ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပိုမြန်မြန် လုပ်ချင်ရင်တော့ Wild Pass Elite ကို Wild Cores ၄၀၀ ပိုပေးပြီး ရယူနိုင်ပါတယ်။ Level တွေကိုလဲ ၁ Level ကို Wild Cores ၁၅၀ ပေးပြီး ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
ဒါတွေကသင့်အတွက်မလောက်သေးဘူးလား? Patch 2.2 က Corgi Corki ၊ Draven Dravem ၊ Fuzz Fizz နှင့် အခြား Skin အသစ်တွေ အများကြီးလဲပါဝင်ပါတယ်။ Patch တောက်လျောက်မှာ ဒီ Skin အသစ်တွေကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ထုတ်သွားမှာပါနော်။ Icons တို့ ၊ Emotes တို့ ၊ Bauble တို့ နဲ့ အခြားအရာတွေအများကြီးလဲပါဝင်မှာပါ။ Event အတွက်တော့ ကစားသမားအသစ်တွေက Mission တွေပြီးအောင်လုပ်ပြီး အလွန်မိုက်တဲ့ Accessories တွေနဲ့ Skin တွေကို ရရှိနိုင်တဲ့ Wild Rift Journey ကို စောင့်မျှော်နိုင်ပါတယ်!
သတိပေးချက် : Patch တောက်လျောက်မှာ ပစ္စည်းတွေထွက်မှာပါနော်။ အကြောင်းစုံကို Patch 2.2 Notes မှာဖတ်ရှိဖို့ ဒီကို နှိပ်လိုက်ပါ။
Codashop နဲ့ ဘဲ Wild Cores တွေဖြည့်ဖို့ မမေ့နဲ့အုန်းနော်။ ပိုမိုမြန်ဆန် စိတ်ချရတဲ့ ငွေဖြည့်တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ စိတ်မပူရဘဲ ဂိမ်းဆော့နိုင်ဖို့ကို အာမခံပါတယ်။
Previous articleMobile Legends Yve လမ်းညွှန် : အကောင်းဆုံး Build နှင့် Zhask ရဲ့ သေလောက်တဲ့ရန်သူကို counter နည်း
Next article2021 မှာ ဝယ်သင့်တဲ့ Free Fire အတွက် လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်း ၆ မျိုး